15fọdụ XNUMX "MacBook Pro Users Report Sound Issues | M si Mac
Fọdụ 15 ″ MacBook Pro Users Report Sound Issues
Emere MacBook Pro nke ọdịda ikpeazụ emere site na ala. Nke a na - eme ka ụlọ ọrụ na - enwe isi ọwụwa, na-eme na ngwa ya, nke siri ike ịchọpụta na usoro a haziri, yana yana ule ngwaahịa. N'ihe metụtara ihe ndị a, na-adịbeghị anya ọtụtụ ndị ọrụ mkpesa nke ụda nsogbu na MacBook Pro, kpọmkwem 15 ″. Enweghị nkọwa ọ bụla banyere nsogbu ahụ: commentfọdụ na-ekwu dị ka a ga-asị na ha na-ekwu ụda ahụ akpọrọ ma ọ bụ na-egbochi ihe ọ bụla na ndị ọzọ na-akọwa ya dị ka a ga - asị na ị jiri nwayọ pịa karama plastik.
Apple maara nsogbu ndị ahụ, dịka ọ dị n'ọtụtụ forums site na ụlọ ọrụ n'onwe ya enwere ọtụtụ ntụnye aka maka nsogbu ndị a. Site n'iji ya eme ihe, ụda Mac na-akpa àgwà ziri ezi. Ma mgbe anyị chọrọ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ karị, dị ka igwu egwuregwu, ma ọ bụ igwu vidio, ndị kwuru ụda nsogbu na-egosi.
Ngwa ngwa Mac ụwa amalitela ịza ajụjụ na nke a. Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na nsogbu ahụ na-esite na ntinye ihuenyo . Gburugburu ha enwere ihe plastik gbakọtara na gluu n'ọnọdụ ụfọdụ. Okpomọkụ nke a na-etinye akụkụ a, yana nnukwu ibu nke 15 ″ ihuenyo tụnyere 13 'ihuenyo ga-akọwa nsogbu a.
Echere m na nsogbu ahụ bụ n'ezie na-adabere, dị ka e nwere nke a bit nke eke mgbanwe na aluminom azụ nke ihuenyo. Echere m na okpomọkụ emetụtala gluu na mgbakọ ihuenyo plastik.
Onye ọrụ ọzọ kwuru:
Enwere m ike igwu ụda ahụ oge niile site na ịpị aka nri na ala nke mgbakọ ngosi ahụ.
Kaosinadị, Apple na-amụ ikpe ọ bụla n'otu n'otu, n'ihi na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ bụ n'ihi uwe onye ọrụ kpatara, na n'ọnọdụ ndị ọzọ ọ dị ka nsogbu nrụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Fọdụ 15 ″ MacBook Pro Users Report Sound Issues
Spotify ga-abịa n’oge na-adịghị anya na Apple Watch
Ebube Mac Pro dị egwu na ebe mgbasa